Ukubaluleka kohlelo lolimi nezimpawu zokuloba kubhulogi Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 6, 2010 ULwesithathu, April 30, 2014 U-Erik Deckers
Abantu abangaziyo bayazi ukuthi ngingaba wuhlelo oluthile lohlelo lolimi nezimpawu zokubhala. Yize ngingeke ngize ngize ngilungise abantu esidlangalaleni (ngimane ngibashaye ngasese), bengaziwa ngokuhlela izimpawu eziqukethe amagama angapelwe kahle, ama-aphostoli abekwe kabi, namaphutha amabi kakhulu.
Ngakho-ke, ngokungadingeki ukusho, ngihlala ngizama ukuqinisekisa ukuthi ukubhala kwami ​​kufinyelela kwisinemfu sohlelo lolimi.
Yebo, ngisho nakumabhulogi.
"Kepha amabhulogi kufanele abe ngawakahlelekile futhi abe nengxoxo."
Hhayi ngendlela ongacabanga ngayo. Kunamabhizinisi amaningi amukela ukubhuloga, futhi azama ukwenza isithombe sokwethenjelwa nokwethenjelwa. Futhi ungakukholwa noma ungakukholwa, amakhasimende azokwahlulela ikhono lenhlangano yonke lokwenza ngisho nomsebenzi walo oyisisekelo oyinhloko kuhlelo lolimi nokupela isipelingi esisodwa sezinga eliphansi le-PR.
“Hawu Nkulunkulu wami, ubambe iqhaza! Ngeke sisayithenga imikhiqizo yakho futhi! ”
Awungikholwa? Naka kakhulu ukuphawula kunoma iyiphi ibhulogi yezepolitiki ngesikhathi sokhetho lukamongameli.
Ngenkathi ungadingi ukubeka lezo zinhlobo zabantu (zidinga ukuthanjiswa esikhundleni), udinga ukuveza isithombe samakhono nobuchwepheshe. Futhi lokho kusho ukuthi udinga ukupela amagama kahle, futhi usebenzise uhlelo lolimi olufanele nezimpawu zokubhala.
Ngezinye izikhathi ngizothumela uDoug i-DM mayelana ne-apostrophe engafanele noma igama elibhalwe kabi kokunye kokuthunyelwe kwakhe kwe-Marketing Technology (okungenzeka ukuthi emuva kwalokho kungenzeka ukuthi kungani Ngijeziswa Ngacelwa ukuthi ngibhale le ndatshana).
Kuningi kakhulu amaphutha ohlelo lolimi okuthi, uma uwenza, ngokungagwegwesi akwenze ubukeke uyisimungulu (Amagama we-Copyblogger, hhayi awami). Izinto ezinjengayo uma kuqhathaniswa nayo futhi uphikisana namaphutha akho okufanele wazi kangcono kunokwenza.
Abantu abaningi bazothi uhlelo lolimi nokupelwa kwama-blogs nje akubalulekile. Ukuthi kufanele sibe abangahlelekile futhi sibuyiselwe emuva, nokuthi akusenandaba.
Kulungile uma ubhala ibhulogi yomuntu siqu ngempilo yakho, nokuthi ulindele kuphela ukuthi kufundwe abangani abambalwa. Ungaba ongakahleleki ngendlela ofuna ngayo, wenze amaphutha esifisweni senhliziyo yakho, futhi ugcwalise okuthunyelwe kwakho ngakho inhlamba engenamusa. (Bukela i wena, Ama-Bloggess.)
Kepha uma ukhuluma ngebhizinisi lakho, inkampani yakho, noma imboni yakho, udinga ukugcina yonke into ihlanzekile futhi ingenamaphutha ngangokunokwenzeka.
Akusona isono uma wenza iphutha. Isikhathi esiningi ngenza amaphutha kokuthunyelwe yibhulogi yami, ikakhulukazi lapho ngikhuluma ngokubaluleka kohlelo lolimi nezimpawu zokubhala. Kepha ngingahlala ngibuyele emuva ngiyokuhlanza. Lokho kuyinto enhle ngokubhuloga: akukho okuhlala njalo, njengamagazini noma incwajana. Idokhumenti ephilayo emile. Yenza umcimbi izikhala ezineminyaka emithathu ubudala.
Ngakho-ke uma wenza iphutha noma amabili, ungalilahli ithemba. Yiba nomuntu omethembayo ambheke futhi akunikeze impendulo ethembekile. Bese ubuyela emuva uphinde ulungise noma yini oyiphuthelwe phakathi kwemijikelezo yakho yokuqala yokuhlela.
Ngoba ngokulungile noma ngokungalungile, ama-nitpickers akhona lapho. Futhi beza ngawe.
Tags: uhlelo lolimiizimpawu zokubhalaKubhala
Angikwazi ukubeka ngamagama ukuthi ngilazisa kangakanani iso lakho ngokuthola amaphutha ami! Ngijwayele ukubhala ekusakazeni ukwazi futhi ngibheke amaphutha ami ngenkathi ngifakazela kalula njengalapho ngibhala. Kuyisiqalekiso esincane. Ngiyabonga ngobuhle babangane!
Lapho ngicebile futhi ngidumile, kuzodingeka ngininxephezele! 😀